ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးချောကလက် Stores ဘာတွေလဲ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးချောကလက် Stores ဘာတွေလဲ
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားဒိန်းမတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလူဇင်ဘတ်, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ဥရောပခရီးသွား
အဆိုပါဥရောပတိုက်ကြီးက၎င်း၏အံ့သြဖွယ်များနှင့်အရသာချောကလက်များအတွက်ကျယ်ပြန့်ကျော်ကြားတဲ့ဖြစ်ပါသည်. တကယ်တော့, သူတို့ခရီးစဉ်အတွင်းအချို့သောအံ့သြဖွယ်အရသာမြည်းစမ်းဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ကြောင်းပြောခရီးသွားလာပျော်မွေ့များစွာကို chocoholics. သငျသညျဥရောပနှင့်ကြည်ညိုချောကလက်အားဖြင့်သင်တို့၏သွားရာလမ်းအောင်နေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့ကြီးသောသတင်းတို! တစ်ဦးကရထား Save ဥရောပချောကလက်မြင်ကွင်းတစ်ခုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စာရင်းတစ်ခုအတူတူထား 10 ဥရောပအကောင်းဆုံးချောကလက်စတိုးဆိုင်များ. သင်တို့သည်ဤတိုင်းပြည်များထဲကတစ်ခုအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေသင့်တယ်, နှင့်အချို့ကိုသင်အံ့သြဖွယ်ချောကလက်တစ်တဏှာရ, ဤတည်နေရာ၏တဦးတည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အချိန်ယူ. သငျသညျစိတျပကျြမညျမဟုတျ.
1. ပဲရစ်မှာတော့အကောင်းဆုံးချောကလက် Stores – Debauve နှင့် Gallais
ပြင်သစ်က၎င်း၏ချောကလက်များအတွက်အများဆုံးအလွန်အမင်း rated နိုင်ငံများကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်. မြို့တော်၏လမ်းများအားဖြင့်သင်တို့၏သွားရာလမ်းအောင်နေချိန်မှာသင်ကချောကလက်စတိုးဆိုင်များအများကြီးကြည့်ဖို့သေချာ. တကယ်တော့, သင်ကြုံတွေ့ရချောကလက်စတိုးဆိုင်၏နံပါတ်နှင့်အတူလွှမ်းစေခြင်းငှါ. သေချာသင်အကောင်းဆုံးပဲရစ်တွေ့ကြုံခံစားစေရန်ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိပါတယ်, ကျွန်တော်ပဲရစ်အတွက်မဖြစ်မနေ-အလည်အပတ်ခရီးချောကလက်ဆိုင်ဘို့န်းကျင်ကိုမေးမြန်း. အတော်များများကဖြစ်ရှိကြောင်းဖြေကြား Debauve နှင့် Gallais. ဒါကစိတ်ကူးစတိုးဆိုင်သာတမြို့လုံးမှာရှိတဲ့ရှေးအကျဆုံးဖြစ်ပါတယ်, သို့သော်တစ်ဦးဂန္ဖြစ်ပါသည်. 1800 ခုနှစ်တွင်၎င်းသည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်နှင့်အစဉ်အဆက်ကတည်းကလူထုများအတွက်အရသာချောကလက်ဖန်တီးထားပါတယ်. တကယ်တော့, သူတို့ပြင်သစ်တရားရုံးနှင့်နပိုလီယံများအတွက်ချောကလက်ပေးသွင်းဖြစ်လာခဲ့သည်ကြောင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်အခါသူတို့ဒါကြီးတွေခဲ့ကြသည်. အတော်များများကအကြီးပြင်သစ်ခေါင်းဆောင်များဟာသူတို့ရဲ့ချောကလက်ပျော်မွေ့, ဒါကြောင့်သင်.
ဘယ်အချိန်မှာကအီတလီနိုင်ငံမှကြွလာ, အများအပြားနှင့် ပတ်သက်. Viziovirtù ချောကလက်ချစ်သူများများအတွက်မဖြစ်မနေ-အလည်အပတ်ခရီးတည်နေရာအဖြစ်. အဆိုပါလူကြိုက်များစတိုးဆိုင်ဗင်းနစ်၏ဗဟိုတွင်တည်ရှိကာ chocoholics အိပ်မက်ဖြစ်ပါသည်. ဆိုင်ထဲမှာအရာအားလုံးရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံးပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူလက်ဖြစ်ဖြစ်ပါသည်. ၎င်းတို့သည်မယုံနိုင်လောက်သောအရသာနှင့်သာယာသော Venetian လေထုကိုပေါင်းစပ်ထားသည်. တကယ်တော့, ချောကလက်တစ်ဝှမ်းကသူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. သူတို့ကလက်တော်ဖြင့်ရိုးရာနည်းလမ်းများနှင့်ယာဉ်အရာအားလုံးအတိုင်းလိုက်နာ. သာအကောင်းဆုံးပါဝင်ပစ္စည်းများနဲ့ပေါင်းစပ်, နှင့်သင်ဗင်းနစ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာမဖြစ်မနေ - အလည်အပတ်ခရီးတည်နေရာရှိသည်.
3. အမ်စတာဒမ်ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးချောကလက် Stores – Vanroselen
အဆိုပါနယ်သာလန်များသောအားဖြင့်သင်ချောကလက်၏စဉ်းစားသောအခါစိတ်ထဲမှကြွလာသောပထမနေရာမဟုတ်ပါဘူး. သို့သျောလညျး, ကဆဲဖြစ်ပါသည် အကြီးအရာအရပျ ကမ်ဘာပျေါမှာအကောင်းဆုံးချောကလက်အချို့ကိုမြည်းစမ်းဖို့. လူကြိုက်အများဆုံးစတိုးဆိုင်တစ်ခုမှာအမ်စတာဒမ်၌တည်ရှိ၏. Vanroselen မည်သူမဆိုများအတွက်မဖြစ်မနေ-အလည်အပတ်ခရီးပွဲချင်းပြီးကမ္ဘာ့အဆင့်မီချောကလက်ကြိုးစားရန်ရှာဖွေနေသည်. သူတို့ရဲ့ store မှာအရာအားလုံးကိုလက်ဖြစ်ဖြစ်ပါသည်, အမျိုးမျိုးသောအသီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူချောကလက်ကိုပေါင်းစပ်ပြီးထူးခြား။ အာဟာရဖြစ်စေသည့်စားသောက်ဆိုင်များကိုဖန်တီးနိုင်သည်.
4. ချောကလက်အိမ် Nathalie Bonn
သငျသညျလူဇင်ဘတ်မှတဆင့်ခရီးသွားလာနေတယ်ဆိုရင်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနာမကိုအမှီဖြစ်လာသည်သောဤအလွချောကလက်စတိုးဆိုင်အားဖြင့်ရပ်တန့်ဖို့သေချာအောင်. သို့သျောလညျး, မူရင်းကတော့ဖြစ်ပါတယ် ချောကလက်အိမ် လူဇင်ဘတ်၏ ဂရန်း Ducal နန်းတော်ဆန့်ကျင်ဘက်တည်ရှိသည်, ထိုသို့ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးချောကလက်ဖန်တီးမှုအချို့မှနေရာဖြစ်သည်. လာမယ့်မူပိုင်ဖို့တည်ရှိပြီး, သငျသညျကိုသူတို့ကသာအကောင်းဆုံးပေးခနြိုငျ. ခံစားနတ်အတွေ့အကြုံအချို့နှင့်အတူအကောင်းဆုံးအရသာအတွက်ကမ္ဘာ.
5. ဗီယင်နာခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးချောကလက် Stores – Xocolat Manufaktur
သငျသညျအစဉျအမွဲဗီယင်နာမြို့တွင် Hietzing ၏ချမ်းသာကြွယ်ဝခရိုင်မှတဆင့်တစ်အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်ယူလိုလျှင်, တစ်ဦးအလည်အပတ်ပေးဆောင် Xocolat Manufaktur. ဒီစိတ်ကူး store မှာ, သငျသညျဥရောပအကောင်းဆုံးချောကလက်အချို့ကိုရှာတှေ့နိုငျ. မြင်မှအလုံးစုံတို့အဘို့ဖန်ထည်အတွက်တင်ပြ, သင်နိုင်ငံတွင်ချောကလက်၏အရှိဆုံးသန့်စင်ပြီးအမျိုးပေါင်းအချို့ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်. သင်ကချောကလက်ပျော်မွေ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ရန်သွားနဲ့ချောကလက်အောင်၏အနုပညာအကြောင်းကိုအနည်းငယ်လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်.
သငျသညျသောဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှာနေနေတယ်ဆိုရင် သမိုင်း၌ငွေရတတ်သော နှင့်အရသာ, ထို့နောက်အဘယ်သူမျှမကနောက်ထပ်ထက်ကိုကြည့်ရှု Erich Hamann အနောက်ဘာလင်. အရာနှစ်ခုကဒီစတိုးဆိုင်ထွက်မတ်တပ်ရပ်စေ. ပထမဦးစွာ, ကစတိုးဆိုင်သူ့ဟာသူ၏အံ့သြဖွယ်သမိုင်းပင်ဖြစ်သည်. ဒါဟာနောက်ကျောမှစတငျရ 1928, ၎င်းသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှလွတ်မြောက်ခဲ့သည့် Bauhaus ပုံစံအဆောက်အအုံတွင်တည်ရှိသည်. ဒုတိယအ, ဒါကြောင့်အစဉ်အလာနှင့်အကြီးမြတ်အရသာသူတို့ရဲ့ဂုဏ်အသရေပင်ဖြစ်သည်. သူတို့ကဆဲစတိုးဆိုင်ကနေမူရင်းစာရွက်မှောင်မိုက်ချောကလက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပါပြီ. သို့သျောလညျး, သူတို့ပင်အဖြူရောင်ချောကလက်နှင့်အမျိုးမျိုးသောသည်အခြားအရသာပူဇော်. သူတို့ရဲ့ချောကလက်အခေါက်မြို့ဟောပြောချက်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သေချာအောင်ဖို့ကြိုးစားလျှင်သင်ကိုယ်ကျစတိုးဆိုင်သွားရောက်ကြည့်ရှု.
7. Bruges ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးချောကလက် Stores – အဆိုပါချောကလက်လိုင်း
ဒါကြောင့်ချောကလက်အတွက်အနုပညာမှကြွလာသောအခါဘယ်လ်ဂျီယံကိုအကောင်းဆုံးတို့တွင်. ဘယ်လ်ဂျီယံမြို့များမှတဆင့်လျှောက်လှမ်းခြင်း, သငျသညျ display ပေါ်မှာအရသာတဖဲ့တွေအများကြီးမြင်ရပါလိမ့်မည်. စိတ်ကူးချောကလက်သည် get ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာများ၏တဦးတည်း အဆိုပါချောကလက်လိုင်း Bruges အတွက်. စတိုးဆိုင်ချောကလက်၏ကောင်းတစ်ဦးအပိုင်းအစအတော်ပင်ကြောင့်မည်သူမဆိုများအတွက်မဖြစ်မနေ-အလည်အပတ်ခရီးဖြစ်ပါတယ်. အစဉ်အလာအရသာအများကြီးနဲ့ကနေရှေးခယျြဖို့ပျော်စရာများနှင့်စမ်းသပ်ဆဲချောကလက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်. ချောကလက်လိုင်းကိုထူးခြားစေသည့်အရာမှာချောကလက်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်. သူတို့ဟာ bean ကိုထံမှချောကလက်ဖြောင့်ပါစေနှင့်ချောကလက်ကြိတ်နှင့်ရောစပ်မှုအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာအထူးပြုပါပြီ. သငျသညျ Bruges အတွက်နောက်တစ်ကြိမ်များမှာ, အဆိုပါချောကလက်လိုင်းမှာအံ့သြဖွယ်အရသာနှင့်လက်ရာမြောက်သောအတွေ့အကြုံများကိုခံစားရန်အချိန်ယူပါ.
8. မက်စ် Chocolatier
ဆွစ်ဇာလန်က၎င်း၏ချောကလက်အဘို့အကျော်ကြား. တကယ်တော့, ကျနော်တို့ကဆွစ်ဇာလန်မှနို့ချောကလက် attribute နိုင်ပါတယ်. သငျသညျတိုင်းပြည်ရပြီးတာနဲ့, သငျသညျချောကလက်နေရာတိုင်းကြောင်းကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်. နီးပါးကိုသင်သွားရတိုင်းသောအရပ်စားရန်တစ်ကိုက်ရာပူဇော်သက္ကာကိုချောကလက်စတိုးဆိုင်များနှင့်ပြည့်ဝ၏. သငျသညျကမျးလှမျးခကျြမှဆွစ်ဇာလန်ရှိပါတယ်အကောင်းဆုံးကိုတွေ့ကြုံခံစားချင်တယ်ဆိုရင်, အများအပြားသဘောတူ မက်စ် Chocolatier အဆိုပါဖြစ်ပါသည် သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ပြီးပြည့်စုံသောအရပ်ဌာန. ဒါဟာဒေသခံတစ်ဦးအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်, နှင့်အကောင်းတစ်ဦးအကြောင်းပြချက်များအတွက်. သူတို့ကထိပ်တန်းအရည်အသွေးပါဝင်ပစ္စည်းများကိုသုံးပါနှင့်ဆွစ်ဇာလန်မှာအကောင်းဆုံးချောကလက်အချို့ကိုထုတ်လုပ်. သူတို့ကအစတစ်မူထူးခြားတဲ့ရှိ, ရာသီအလိုက်ချောကလက်အရသာစေသည်လေးရာသီ menu ကို. နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်, သငျသညျအရသာအမျိုးမျိုးကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်, အပေါ်မူတည်သည့်အခါသင်သည်ကိုယ်ကျစတိုးဆိုင်သွားရောက်ကြည့်ရှု.
Lucerne ရထားမှ Bern
Lucerne ရထားမှ Konstanz
9. ဘူဒါပက်ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးချောကလက် Stores – ချောကလက် Rozsavolgyi
ဟန်ဂေရီ chocoholics များအတွက်ဝှက်ထားသောကျောက်မျက်ဖြစ်ပါသည်. သူတို့ကအံ့သြဖွယ်အချိုပွဲအမျိုးမျိုးလုပ်, နှင့်၎င်းတို့၏ချောကလက်ခြွင်းချက်များမှာ. အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ချောကလက်ကိုခံစားရန်အလည်အပတ်ခရီးသည်ဖြစ်သည် ချောကလက် Rozsavolgyi ဘူဒါပက်အတွက်. ဒါဟာချိုမြိန်ရယူထားသောအများကြီးကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်, အရေးအကြီးဆုံးကတော့, အံ့သြဖွယ်ချောကလက်ဖန်တီးမှု. သူတို့ရဲ့ချောကလက်သူတို့ရဲ့ချောကလက် bonbons နှင့်အတူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျော်ကြားမှုရရှိ, နှင့်သင်သည်ထိုသူတို့ကြိုးစားသောအခါ, ဒါဟာဘာကြောင့်ရှင်းပါတယ်. ငွေရတတ်သောသူ, ရှိအောင်နှစ်သက်တဖဲ့သညျကောငျးကငျများမှာ. သငျသညျလျှင်အားဖြင့် stop ခရီးသွားလာ အဘူဒါပက်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းထဲတွင်နောက်ဆုံး 10 ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးချောကလက် Stores ဖြစ်ပါသည် Sprungli. သငျသညျဆွစ်ဇာလန်ချောကလက်၏ဂန္ထဝင်စိတ်ကူးသည့်နေရာတစ်နေရာရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်, ကြည့်ရှုခြင်းမရှိထပ်မံထက် Sprungli ဇူးရစ်အတွက်. ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် 1859 နှင့်အံ့သြဖွယ်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ, အစဉ်အဆက်ကတည်းက handcrafted ချောကလက်ဖန်တီးမှု. သငျသညျပါဝင်ပစ္စည်းများ၏အကောင်းဆုံးသောကနေထုတ်လုပ်ကြီးမြတ်ချောကလက်တွေ့ကြုံခံစားချင်တယ်ဆိုရင်, Sprungli သွားရောက်ကြည့်ရှု.
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်, ဥရောပကအကောင်းဆုံးချောကလက်နှင့်အကောင်းဆုံးချောကလက်စတိုးဆိုင်များသို့မဟုတ်ရုံ choco ပန်ကာရှာနေသူတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားစရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
သငျသညျဥရောပမှတဆင့်သင်၏နောက်ခရီးစဉ်အတွင်းတစ် chocoholics ပရဒိသုတွေ့ကြုံခံစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? စာအုပ်တစ်ဦးကရထားလက်မှတ် နှစ်သက်ရာခရီးနှင့်အရသာအားလုံးသည်သူတို့ပူဇော်ဖို့ရှိသည်.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “10 ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးချောကလက် Stores” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-chocolate-stores-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#သကြားလုံးဆိုင်တစ်ဆိုင် #စျေးဆိုင် ခြော့ကလကျ europetravel အစားသောင်းကြမ်းသူ
ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပေါ်တူဂီရထားခရီးသွားလာ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ဥရောပခရီးသွား